डेट एक्सपाएर औषधि सहित राहत लिएर आएको छ भारत | Pokhara
2096 News of Nepal	3 years ago Shrestha
यतिबेला भारतले असल छिमेकीले गर्ने व्यवहार भन्दा प्रचार बढि गरेको देखिन्छ । अध्ययागमनका एक अधिकारीले भने– ‘भारतीय जहाज आउँछन । सबै राहत होला भन्यो । आधा भन्दा बढि टेलिभिजनका सामान वाटरप्रुफ सहित आउँछन । हामी हेरेको हेरै छौं ।’
भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने जसरी भारत नभए नेपालले यति सहज अनुभुति गर्न पाउने थिएन भने जुन ढंगले प्रचार गरिएको त्यसेको भित्री पक्ष भने खतरनाक छ । भारतीय सेनाले आफ्ना मिडियालाई हेलिकप्टरमा चढाएर केही भयावह दृष्य कैद गरेर जुन ढंगले एकोहोरो प्रचार गरेको छ, त्यो उद्धार भन्दा प्रचार बढि देखिएको छ ।
भारतबाट जति सहयोग भनेर गाडी, जहाज, हेलिकप्टर आए सबै भारतीय नागरिकका लागि उद्धारमा तल्लिन देखिन्छ । यतिबेला अन्य मुलुकबाट आएको उद्धार टोलीलाई समेत भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ । भारतले राहतका लागि लिएका औषधी, खाद्यय सामाग्री लगायतको जसरी प्रचार गरिएको छ त्यसको गुणस्तर, एक्सपाएर डेट समेत गएको देखिन्छ ।
मुलुकले महाविपत्ति बेहोरिरहेको बेला ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ शैलीमा भारत प्रस्तुत भएको छ । उसले मोदी सरकारकै कारण नेपालले यति ठूलो विपत्ति भोग्दा समेत तत्कालै राहत महसुस ग¥यो भनि जुन प्रचार गरेको छ, त्यसबाट असल छिमेकीको व्यवहार नभएको नेपाली कुटनीतिज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
अहिले अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल भारतीय सेनाको इसारामा चलेको छ । भारतबाट ल्याईका ३ ठूला कार्गो, १२ हेलिकप्टर मध्ये ६ वटा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको छ । ६ वटा पोखरामा । भारतीय सेनाले जहाज र हेलिकप्टर राखिरहेका कारण त्रिपाल, औषधी स्वास्थ्यकर्मी सहितको चाइनिज २ जहाज अवतरण हुन सकेन । त्यस्तै टीजी फ्लाइटलाई समेत भारतीय हेलिकप्टर र कार्गोकै कारण अवतरण हुन सकेन ।
भारतीय पक्षले कुनै सहयोग नगरेको भन्ने होइन । तर, उसको एक पक्षले पुरै प्रचार बाहेक केही गरेको छैन । पोखरा विमानस्थलका एक कर्मचारीले भने– ‘हाम्रो एउटा र भारतीय हेलिकप्टर २ वटा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा गयो । भारतीय हेलिकप्टरले ५ वटा त्रिपाल बोकेर गयो । पछि आउँदा घाइते, विरामी नभई १७ जना भारतीय नागरिक लिएर फर्कियो ।’
त्यस्तै भारतबाट सहयोग, उद्धार सामाग्री लिएर आएका बसमा भारतीय नागरिक छानिछानि लगेको तथ्य राजधानीमै छ । जब ‘मिल्ट्र भाषामा’ उद्धार भनेको ‘१५ देखि २० मिनेटमा समेत मान्छे बचाउन सकिन्छ । उद्धार गर्दा कुन देशको नागरिक, कुन लिङ्ग, कुन भाषिक भनेर भेदभाव गर्न पाइन्नँ । मानवता पहिलो हो भन्ने मिल्ट्री सिद्धान्त हो ।’
Indian Tourist rescued by the Indian Air Force. The true victims of earthquake were left behind.
गृहमन्त्रालयको एक उच्च स्रोतका अनुसार उत्तरप्रदेशबाट आएको ६ ट्रक औषधीको डेट एक्सपाएर हुन जम्मा ४५ दिन मात्रै बाँकी छ । जब कि १३ जिल्लाका विगत गाउँमा औषधी पु¥याउन कम्तिमा १० दिन लाग्छ । विरामीले त्यो औषधी कति दिन खाने ? स्रोतले भन्यो । अहिले ती ४५ दिन म्याद भएका औषधी प्रयोग गर्ने नगर्ने बारे गृहमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
PREVIOUS NEWS of NEPAL
News of Nepal	3967
साउदी अरबमा विस्फोट, कम्तिमा ३० जना मारिए
News of Nepal	3638
News of Nepal	4258
News of Nepal	3387
News of Nepal	4264
News of Nepal	3030
News of Nepal	2983
News of Nepal	3634
News of Nepal	3357
News of Nepal	2798
News of Nepal	3135
News of Nepal	3826
News of Nepal	3003
News of Nepal	1379
News of Nepal	2096
News of Nepal	1720
अब नेता भोट माग्न आए कुटेर पठाउने चेतावनी
News of Nepal	1656
News of Nepal	1650
धरहरा र सगरमाथा नचिन्ने के पी ओली
News of Nepal	1748
Pokhara by Pokharacity.com